နို့တိုက်မေမေတွေကြုံရတတ်တဲ့ နို့ကြောင်းပိတ်ခြင်း - Hello Sayarwon
Hello Sayarwon မှ ထွက်မည်။
ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို လာရောက်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ ပိုမိုကျန်းမာပျော်ရွှင်ပြီး အသက်ရှည်ရှည် နေနိုင်မယ့် နည်းလမ်းကောင်းတွေကို ရှာဖွေလိုက်ပါ။ Hello Sayarwonမှာ ဆောင်းပါးတွေကို ဖတ်ရှုလိုက်ပါ။
မျက်စိမှုန်ဝါးခြင်း နှင့် မျက်စိကွယ်ခြင်းမျက်စိရောဂါများမျက်စိထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းရေတိမ်အတွင်းတိမ်အခြားမျက်လုံးပြဿနာများ
သားအိမ်အလုံးတည်ခြင်းရောဂါများသားဥအိမ်အရည်အိတ်တည်ခြင်း ရောဂါစုတင်ပါးဆုံပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများမီးယပ်သွေးဆုံးခြင်းအမျိုးသမီးရောဂါများအတွက် စစ်ဆေးခြင်းရာသီလာခြင်းအမျိုးသမီးကျန်းမာရေးပြဿနာများအမျိုးသမီးများတွင် ဖြစ်လေ့ရှိသည့် ဟော်မုန်းမမျှတခြင်းမိန်းမကိုယ်ရောင်ရမ်းခြင်း
အမျိုးအစား (၁) ဆီးချိုအမျိုးအစား (၂) ဆီးချိုဆီးချိုရောဂါ နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာများ
တက်ကြွလှုပ်ရှားစွာနေထိုင်ခြင်းသက်ကြီးပိုင်းစိတ်ကျန်းမာရေးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အိုမင်းခြင်းသက်ကြီးရွယ်အို အာဟာရအဖြစ်များသော လူကြီးရောဂါများ
စွဲလမ်းမှုပြဿနာများအစိုးရိမ်လွန်ခြင်းနှင့် ကြောက်ရွံ့ခြင်းများစိတ်ခံစားမှုပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများမိမိကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်ခြင်းမှကာကွယ်ခြင်းစိတ်ဖိစီးမှုဖြေလျှော့ခြင်းစားသောက်မှုဆိုင်ရာ စိတ်ဝေဒနာများပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ ဆက်ဆံရေးအခြားစိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများစိတ်မူမမှန်မှု ပြဿနာများ
နား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်း
အန္တရာယ်ကင်းစွာ လိင်ဆက်ဆံခြင်း/လိင်မှကူးစက်သောရောဂါများမှ ကာကွယ်ခြင်းChalamydia ပိုးဝင်ခြင်းဆစ်ဖလစ်ပိုးဝင်ခြင်း(ကာလသားရောဂါ)ဂနိုရောဂါ(ဆီးပူညောင်းကျ)လိင်အင်္ဂါကြွက်နို့များTrichomoniasis ရောဂါပိုးဝင်ခြင်းHIV နှင့် AIDS ရောဂါလိင်မှတစ်ဆင့်ကူးစက်သော အခြားရောဂါများသားဆက်ခြားခြင်းလိင်မှုဘဝသာယာပျော်ရွှင်ရေး လမ်းညွှန်ချက်များရေယုန်
လက်သည်းခြေသည်း ထိန်းသိမ်းခြင်းဆံသားနှင့် ဦးရေပြားကျန်းမာရေးအသားအရေ ထိန်းသိမ်းခြင်းကူးစက်နိုင်သော အရေပြားရောဂါများဝက်ခြံဆိုရီရေးစစ်ရောဂါအရေပြားရောင်ရမ်းခြင်းများအခြားအရေပြားပြဿနာများ
နာတာရှည် လေပြွန်ရောင်ရောဂါအဆုတ်လေအိတ်ငယ်များ ပျက်စီးသော ရောဂါလေပြွန်ပြည်တည်နာပန်းနာရင်ကျပ်ရာသီတုပ်ကွေးတီဘီရောဂါအဆုတ်ပွရောဂါအဆုတ်တွင်း granuloma အကျိတ်ဖြစ်ခြင်းအအေးမိဖျားနာခြင်းလေပြွန်ရောင်ရောဂါအဆုတ်သွေးကြော သွေးခဲပိတ်ရောဂါအခြား အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါများ
အတက်ရောဂါမှတ်ဉာဏ်ထိခိုက်ခြင်းနှင့် အယ်ဇိုင်းမားရောဂါMultiple Sclerosis ရောဂါပါကင်ဆန်ရောဂါလေဖြတ်ခြင်းနှင့် ဦးနှောက်သွေးကြောဖောင်းခြင်းခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့် ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ရောဂါဦးနှောက်နှင့် အာရုံကြောမကြီး ရောဂါအစွန်အဖျား အာရုံကြောစနစ် ရောဂါများတခြား ဦးနှောက်နှင့် အာရုံကြောရောဂါများ
အခြား ဓာတ်မတည့်ခြင်းများတိရစ္ဆာန် နှင့် အင်းဆက်ပိုးကောင်များကြောင့်ဓာတ်မတည့်ခြင်းအရေပြား အလာ့ဂျစ် (ဓာတ်မတည့်)ဖြစ်ခြင်းနှာခေါင်းနှင့် မျက်လုံးအစာဓာတ်မတည့်ခြင်း
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကူးစက်ရောဂါများအစားအသောက်မှကူးစက်သောရောဂါများတခြား ဘက်တီးရီးယား ကူးစက်ရောဂါများလေထဲမှတဆင့် ကူးစက်သော ရောဂါများဇီကာဗိုင်းရပ်စ်သွေးလွန်တုပ်ကွေးအင်းဆက်မှတဆင့် ကူးစက်သော ရောဂါများတခြား ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ရောဂါများဦးနှောက်အမြှေးရောင်ခြင်းရေယုန်တိုက်ဖွိုက် (အူရောင်ငန်းဖျား)
အစာအိမ်အနာဗိုက်ကယ်ခြင်း နှင့် လေပွခြင်းဝမ်းချုပ်ခြင်းဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောခြင်းအူရောင်ရောဂါများ (IBD)အူမကြီးရောဂါများ (IBS)ရင်ပူခြင်း၊ ရင်ခေါင်းအောင့်ခြင်းအစာအိမ်အက်ဆစ်ရည်ပြန်ဆန်တက်ခြင်းအစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်းအနာအစာအိမ်ရောင်ခြင်းအခြားအစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းပြဿနာများဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် အထက်လန်အောက်လျှောခြင်းအူသိမ်တွင်ဘက်တီးရီးယားပိုးပေါက်ခြင်းသည်းခြေဆိုင်ရာရောဂါများလိပ်ခေါင်းရောဂါများအထက်လန်အောက်လျှောခြင်းအသည်းရောဂါများ
အရိုးပွခြင်းအဆစ်ရောင်ရောဂါများအရိုးအကြောခွဲစိတ်ကုသမှုများအရိုးကျိုးခြင်းအခြား အရိုးရောဂါများအခြား အဆစ်နှင့် အရွတ်ရောဂါများအရိုးအကြောအဆစ်အမြစ်နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းများ
ကျန်းမာရေး အာမခံကျန်းမာရေး သတင်းများရောဂါလက္ခဏာများအခြေခံကျသည့် ကျန်းမာရေးဗဟုသုတများဆေးရုံနှင့် ဆရာဝန် အတွေ့အကြုံဆေးစစ်ချက်များဆေးပညာကုထုံးနှင့် ခွဲစိတ်ကုသမှုများ
သွား နှင့် ခံတွင်းကျန်းမာရေး
သွားဖုံးနှင့် ခံတွင်းရောဂါများသွားပြဿနာများသွားနှင့် ခံတွင်း သန့်ရှင်းရေးသွားအလှပြုပြင်ခြင်းသွားနှင့်မေးရိုးခွဲစိတ်ကုသမှုများအခြားခံတွင်းရောဂါ ပြဿနာများ
ကလေးငယ်မတ်တတ်ပြေးအရွယ် နဲ့ မူကြိုအရွယ်ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးကျန်းမာရေးဆယ်ကျော်သက်အရွယ်
ခန္ဓာကိုယ် ထုထည်ညွှန်းကိန်း (BMI) တွက်ချက်ခြင်း
အခြေခံ တစ်နေ့တာ ကယ်လိုရီလိုအပ်ချက်ပမာဏ (BMR) တွက်ချက်ခြင်း
မီးဖွားမယ့်ရက် တွက်ချက်ခြင်း ကိရိယာ
ကျန်းမာရေး ကိရိယာ အားလုံးကို ကြည့်ရှုမည်
Aye Thi Mon မှ ရေးသားသည်။ 21/09/2020 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
Hello Sayarwon Panel မှ အချက်အလက် စစ်ဆေးထားပါသည်။
မေမေတစ်ယောက်ဖြစ်ရတာ ခက်ခဲတယ်ဆိုတာကို လူတိုင်းသိပြီးဖြစ်မှာပါ။ ဒီတစ်ခေါက်တော့မေမေတို့ကြုံရနိုင်တဲ့ အခက်အခဲတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ နို့ကြောင်းပိတ်တဲ့ပြဿနာအကြောင်းလေးပြောပြပေးပါရစေ။ နို့ကြောင်းပိတ်တဲ့အခါ ရင်သားက နာကျင်ရသလို ရင်သွေးလေးကို နို့ချိုတိုက်ရာမှာလည်း အခက်အခဲဖြစ်ရပါတယ်။
ရင်သွေးလေးကို ၆ လအထိမိခင်နို့တစ်မျိုးတည်းကို တိုက်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်ဆိုတာပြောနေစရာတောင် မလိုအောင်ပါ။မေမေတိုင်းမှာလည်း ရင်သွေးလေးကို နို့ချိုတိုက်ကျွေးလို့ ကျန်းကျန်းမာမာကြီးပြင်းလာစေချင်တဲ့ဆန္ဒက ရင်နဲ့အပြည့်ပါ။ ဒီတော့မေမေတစ်ယောက်က ရင်သွေးလေးကို နို့ချိုတိုက်ကျွေးချင်ပေမယ့် နို့တွေခဲနေလို့ နို့ကြောင်းပိတ်ပြီးနာကျင်နေလို့ မတိုက်ရတာမျိုးတွေတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းလေးကိုဆွေးနွေးပါရစေ။
နို့ကြောင်းပိတ်ရတာက နို့တိုက်မေမေတွေမှာအဖြစ်များတဲ့ ရင်သားပြဿနာတစ်ခုပါ။ ရင်သွေးလေးကို နို့တိုက်တဲ့အခါ ကလေးရဲ့ ပါးစပ်ထဲက ဘက်တီးရီးယားတွေ ကူးစက်တာကြောင့်ဖြစ်ရတာပါ။ ဒီအခြေအနေက ကလေးမွေးပြီး ၁ လကနေ ၃ လအတွင်းမှာ အဖြစ်များပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခါတလေမှာ ဒီပြဿနာက ကလေးမွေးမထားတဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာဖြစ်နိုင်သလိုသွေးဆုံးပြီးတဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီလိုဖြစ်တာက ကျန်းမာနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာဖြစ်ခဲပြီး ဆီးချိုရောဂါရှိသူတွေ နဲ့ အခြားနာတာရှည်ရောဂါရှိသူတွေမှာ အဖြစ်များပါတယ်။ ကိုယ်ခံအားနည်းတဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာ ပိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နို့တိုက်မေမေ ၁ယောက်ကနေ ၃ယောက်လောက်က အခုလိုပြဿနာနဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်ပါတယ်။ ဒီပြဿနာကိုဖြစ်စေတဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်းက ကလေးကိုနို့တိုက်တဲ့အခါ နို့တွေကျန်ခဲ့ပြီး နို့ရည်ပို့ပြွန်တွေမှာ နို့တွေခဲသွားရာကနေစလာတာပါ။ ရင်သွေးလေးမွေးထားပြီး အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့မို့ နို့ချိုမတိုက်ကျွေးမိတဲ့မေမေတွေမှာလည်း အဖြစ်များပါတယ်။
နို့ကြောင်းပိတ်တယ်ဆိုတာ တကယ်ကတော့ ရင်သားထဲမှာရှိတဲ့ အချို့နေရာက နို့ရည်ပြွန်လေးတွေပိတ်သွားတာပါ။ နို့ကြောင်းပိတ်တဲ့အခါ
ရင်သားက မာခဲလာနိုင်သလို ရင်သားမှာ အဖုမာမာလေးတွေကိုလည်း စမ်းမိနိုင်ပါတယ်။
ရင်သားက နီမြန်းရောင်ရမ်းပြီး ထိလိုက်ရင်နာနေနိုင်ပါတယ်။
ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါ ရင်သားကိုရေနွေးအိတ်ကပ်ပေးတာ၊ နှိပ်နယ်ပေးတာ၊ နို့တွေကို ညှစ်ထုတ်ပစ်တာတွေ လုပ်ကြည့်ပေးပါ။ ဒီလိုလိုလုပ်ပေးပေမယ့် ၂ ရက်လောက်ကြာတဲ့အထိမှ မသက်သာဘူး။ အလုပ်တွေမလုပ်နိုင်အောင်ကို ရင်သားကနာနေမယ်၊ အဖျားကမပျောက်ဘဲဖြစ်နေမယ်၊ဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ အမြန်ဆုံးသွားပြပေးဖို့ပြောပါရစေ။
နို့ကြောင်းပိတ်တာကြောင့် အခုလိုအခြေအနေတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ ချက်ချင်းကုသမှုခံယူဖို့လိုပါမယ်။
ရင်သားကနေ နို့မဟုတ်ဘဲ အရည်တွေထွက်မယ်
ရင်သားက ထိမခံနိုင်အောင်နာလို့ ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဖြစ်မယ်။
အဖျားက ၁၀၁.၅ ဒီဂရိဖာရင်ဟိုက်ဖြစ်နေမယ်။
မူးနေမယ်၊ ကိုယ်လက်မအီမသာဖြစ်နေမယ်။ နုံးနေမယ်ဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်နဲ့ အမြန်ဆုံးသွားပြပေးပါ။
အလုပ်သွားတဲ့အခါမှာ နို့တွေကို ညှစ်ထုတ်ပါ။
Hello Health Group သည် ဆေးပညာအကြံဉာဏ်များ၊ ရောဂါရှာဖွေမှုများနှင့် ကုသမှုများ မပြုလုပ်ပေးပါ။
မေမေ့မှာ တီဘီရှိရင် ဘေဘီလေးကိုနို့တိုက်လို့ဖြစ်ပါ့မလား......
ကလေးနို့တိုက်နေတဲ့မေမေတိုင်း သိသင့်တဲ့ ရှောင်ရန် ဆောင်ရန် အချက်တွေ။ ။
Helloဆရာဝန်အနေဖြင့် ပိုမို ကျန်းမာပျော်ရွှင်စေဖို့ နှင့်ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ရာတွင် စိတ်ချရသော ကျန်းမာရေး အချက်အလက်များကို ထောက်ပံ့ပေးသည့် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်ပေးသူ ဖြစ်ချင်ပါတယ်။
ကျန်းမာရေး ဆောင်းပါးများကျန််းမာရေး ကိရိယာများ
ကြော်ငြာနှင့် စပွန်ဆာ လက်ခံခြင်းဆိုင်ရာ မူဝါဒ
Hello Health အကြောင်း
©2021 Hello Health Group Pte. Ltd. All Rights Reserved. Hello Health Group သည် ဆေးပညာအကြံဉာဏ်များ၊ ရောဂါရှာဖွေမှုများနှင့် ကုသမှုများ မပြုလုပ်ပေးပါ။